XOG XASAASI: Maxaa ka Ogtahay in madaxweynihii hore Sheekh Shariif loo diiday inuu u duulo magaalada Kismaayo? Yaase ka dambeeyay? | HalQaran.com
Madaxweynihii hore Somaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed /Sawir Hore/Keydka
Muqdisho (Halqaran.com) – Warar goor-dhow soo gaaray mareegta Halqaran.com, ayaa sheegaya, in Axaddii maanta magaalada Muqdisho lagu xayiray diyaaradii qaadi laheyd madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sheekh Shariif oo ka soo laabta dalka Turkiga, ayaa waxa uu doonayay in Muqdisho uu kaga gudbo Magaalada Kismaayo si uu uga qeyb galo Caleema saarka Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Madoobe.
Diyaaradda oo aheyd mid Shacab ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ay u diiday in uu raaco Sheekh Shariif, waxaana dowladda ay ka dalbaday in qof Siyaasi ah aysan qaadi karin marka laga reebo Shacab, sida ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ay u sheegeen mareegta Halqaran.com.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhowr Sacadood ku xayirnaa Garoonka Muqdisho qeybta loogu tala galay Madaxda, waxaana ugu dambeyntii diyaaradii qaadi rabtay ay ka go’aansatay in ay ka tagto, laakiin Jubbaland ayaa ku amartay diyaaradda in aysan imaan karin Kismaayo hadii aysan soo qaadin Sheekh Shariif.
Si kastaba ha’ahaatee, dhacdadan ayaa si weyn loo hadal haya Waxaana goobta hadda uu ku sugan yahay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif ku sii qul qulaya Xildhibaano, Wasiirro iyo Saraakiil Ciidan.
Lama oga sida uu xaalka uu noqon doonto, maadaamka Sheekh Shariif loo diiday diyaaradii uu u raaci lahaa Kismaayo, Jubbalanna ay ku amartay diyaaradaasi in aysan imaan karin Kismaayo iyadoo aysan wadin Sheekh Shariif.
DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: ”Maamul xumada Muuse Biixi waxay keentay inay dadka Somaliland ku fikiraan inay JABHADO sameystaan!” waxa yiri…
lagu xanibay Muqdisho
Madaxweynihii hore Soomaaliya